मुटुरोगीलाई दशैँ टिप्स : खानपानमा ध्यान दिनुहोस्
विराटनगर १९ असोज । दशैँमा अधिकांश नेपालीहरुको घरमा खसी, बोका, राँगा, कुखुरा, हाँस लगायतका पशु पंक्षी काटिने गर्छन् । आफ्नै घरमा नकाट्नेले पनि अन्यत्रबाट चार पाँच दिनलाई पुग्ने मासु किनेर ल्याउने गरिन्छ । दशैंलाई नेपालीहरुले स्वादिस्ट खानेकुरा, मदिरापान र रमाइलोको पर्वका रुपमा मनाउने प्रचनल छ ।
अझ दशैंलाई मासु र रक्सी खाने पर्वका रुपमा पनि चिनिन थालिएको छ । दशैंको समयमा बजारमा पाइने अस्वस्थकर मासु तथा धेरै चिल्लो मसलेदार खानुका कारण तत्कालै उल्टी हुने, फुड पोइजनिङ्ग, टाइफाइड, झाडापखला, क्षयरोग, आउँ, पेट फुल्ने, मृगौलाको रोग लगायतका समस्या समेत देखिने गरेको छ ।
खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा दशैंको रमाइलो समयमा उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका विरामीको संख्या बढ्ने गर्छ । थोरै मात्रामा बोसो नभएको मासुले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउछ । तर, मासु खाने तथा पकाउने बेलामा ध्यान दिइएन भने त्यसले स्वास्थ्यमा थप समस्या निम्त्याउन सक्छ । अझ रोग लागेको मानिसहरूले खानेकुरामा लापरवाही गरेमा रोग बल्झिने समस्या बढेर जान्छ ।
मोटोपनको समस्या भएका, रगतमा कोलेस्ट्रोल बढी भएका, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरीक एसिड, बाथ रोग भएका व्यक्तिले सकभर मासु नखानु नै राम्रो हुन्छ र खाए पनि एकदम कम मात्रामा खाने गर्नु पर्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार नेपालीको भान्छामा पाक्ने खानेकुरा चाडबाडमा मात्र नभई अन्य सामान्य समयमा पनि मुटुका लागि उपयुक्त हुँदैन । अझ दशैंको समयमा मुटुरोगी तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई सोझै असर गर्छ रातो मासुका परिकार हुन्छन् । दशैंमा लगातार ४ देखि ५ दिनसम्म बिहान, दिउसो र बेलका मासुकै परिकार पाकिरहेको र खाइरहेको हुन्छ । त्यो पनि अत्याधिक मात्रामा बोसो भएको र चिल्लो तथा मसला हालिएका । रातो मासु र चिल्लो दुवै मुटुका बिरामीलाई हानिकार खानेकुरा हुन् ।
बरिष्ठ फिजिसियन डा. ध्रुवप्रसाद सिंहका अनुसार रातो मासु, छाला वा मासुमा हुने वोसोले नसर्ने खालका रोगका साथै प्रत्यक्ष सम्बन्धित जनावरमा रहेको रोगसमेत सर्ने संभावना उत्तिकै रहेको हुन्छ । मोटोपना, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टेरोल, मधुमेह आदिको कारणले मुटु रोगहुन सक्ने हुँदा यस्ता कुरालाई अगाडी नै नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ । धुम्रपान, मदिरापान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, मासु, चिल्लो, बोसोयुक्त खानेकुरा तथा जंक फुडको सेवन नगर्दै ठिक हुन्छ ।
बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीका अनुसार मुटुका बिरामी र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले यो समयमा स्वास्थ्यको समस्याबाट जोगिन रातो मासु अर्थात खसी र राँगाको मासु नखाने, रक्सी, चुरोट तथा सुर्ती जन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, चिल्लो, पिरो तथा मसला युक्त खानेकुराको मात्रा कम गर्ने, कुखुरा, हाँस तथा माछा पनि थोरै मात्रामा खाने, नुन धेरै हालिएको खानेकुरा पनि खाने गर्नु हुँदैन । मुटुका बिरामीहरुले एक दुई टुक्रा सेतो मासु र प्रसस्त मात्रामा हरियो सागसब्जि तथा फलफुल खानु नै उनीहरुको स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा उत्तम हुने डा. रेग्मीको भनाई छ ।
खानपानमा सन्तुलन राखी नियमित ब्यायाम गरेर समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराए मुटु रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । मुटु रोगको प्रारम्भिक अवस्थामा उपचार गरे जोखिम कम हुने गर्छ । तर, रोग छिप्पिँदै गएमा उपचार कठिन हुनुका साथै उपचार पनि धेरै महंगो हुने भएकोले दशैं तथा अन्य चाडपर्वमा खानपानमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।